လူအများသင်ယူမှု အတွက် ပုံစံထုတ်ခြင်း – Thar Htet – Medium
A Software Engineer turned Entrepreneur, runningaSoftware Company in Myanmar serving Web, Mobile and Cloud solutions to Consumer, Businesses & Public.
လူအများသင်ယူမှု အတွက် ပုံစံထုတ်ခြင်း
Design for How People Learn စာအုပ်သည် သင်ခန်းစာ ဖန်တီးသူများအတွက်အလွန်ရှင်းလင်းလွယ်ကူသည့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်မှ အခန်းတစ်ခုခြင်းကို အနှစ်ချုပ်ဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်ယူတတ်မြောက်မှုတွင် သင်ယူသူအနေဖြင့် ဗဟုသုတပိုမိုသိရှိသွားခြင်း တစ်ခုတည်းမဟုတ်ချေ။ ၎င်းဗဟုသုတကို အသုံးချပြီး လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းသည် ပဓာနဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ သင်ယူသူ၏ အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ ဗဟုသုတ ဖြစ်သော်လည်း၊ ထိုလိုအပ်သော ဗဟုသုတ၊ အချက်အလက်မှာ ၎င်းလိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုကို တတ်မြောက်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့သာ ဖြစ်သည်။
“သူ့အနေနဲ့ လေ့ကျင့်မှု မလိုဘဲ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်နိုင်မလား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးပြီး သင်ယူသူသည် “ကျွမ်းကျင်မှု” လိုအပ်သလားဟု အကဲဖြတ်နိုင်သည်။ အဖြေက “မလုပ်နိုင်ပါ” ဟုဆိုပါက၊ သင်ယူသူအတွက် လေ့ကျင့်ရန် အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးပြီး ကျွမ်းကျင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
သင်ယူသူ၏ စိတ်နေစိတ်ထားနှင့် ၎င်းအား လှုံ့ဆော်မှု အရင်းခံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ထိုသူသည် လုပ်ဆောင်နည်းကို သိသော်လည်း၊ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မအောင်မြင်ဖြစ်နေလျှင် အခြားအကြောင်းရင်းခံများရှိနိုင်သည်။
အပြောင်းအလဲတိုင်းသည် ခက်ခဲလေရာ၊ သင်ယူသူ အနေဖြင့် အရိုးစွဲနေသော အကျင့်နှင့် ဆောင်ရွက်ပုံများကို ပယ်ဖျောက်ပစ်ရန် လိုအပ်ခြင်းသည် အပြောင်းအလဲလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆင့်တစ်ခု ဖြစ်လေသည်။
ပါတ်ဝန်းကျင်သည်လည်း သင်ယူသူအား အထောက်အပံ့ပြုရမည်။ သင်ယူသူသည် ၎င်းတတ်မြောက်လာသည်ကို အသုံးချရာတွင် ပါတ်ဝန်းကျင်က အတားအဆီးပြုနေပါက မအောင်မမြင်ဖြစ်ပေမည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပြဿနာမှာ သင်ယူရာတွင်မဟုတ်ဘဲ၊ ဦးဆောင်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် လမ်းညွှန်မှုပေးရာတွင် ဖြစ်နေတတ်သည်။ ၎င်းအကြောင်းမှန်ကို သိရှိခြင်းဖြင့် လမ်းကြောင်းမှားတွင် အချိန်ကုန်လူပမ်းဖြစ်ခြင်းမှသက်သာမည်။
ပြဿနာကို တိတိပပ ပြဌာန်းထားပါမှ ထိရောက်သော သင်ခန်းစာ (သင်ယူမှု နည်းလမ်း) ကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြဿနာကို မဖြေရှင်းခင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပြီး တိတိပပ ပြဌာန်းရန် အချိန်ပေးခြင်းဖြင့် ရေရှည်တွင် အကျိုးများလေသည်။
Like what you read? Give Thar Htetaround of applause.
Never missastory from Thar Htet, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Thar Htet